Loop & Tie: B2B Kuparidzira Kupa Chipo Iko Zvino Chigadzirwa CheSalesforce MuAppExchange Musika | Martech Zone
Chidzidzo icho chandinoramba ndichidzidzisa vanhu muB2B kushambadza ndechekuti kutenga kuchiripo pachedu, kunyangwe kana uchishanda nemasangano makuru. Sarudzo-vagadziri vane hanya nebasa ravo, kwavo kushushikana mazinga, ravo rebasa vhoriyamu, uye kunyangwe zvavo zuva nezuva-kwezuva kunakidzwa kwebasa ravo. SeB2B sevhisi kana mupi wezvigadzirwa, ruzivo rwekushanda nesangano rako kazhinji runokunda izvo zvinowaniswa.
Pandakatanga bhizinesi rangu, ndakashamisika nazvo. Ini ndakangotarisa zvangu pane zvinodzidziswa izvo zvandaigona kupa bhizinesi kuti ndivandudze. Ini ndaigara ndichivhunduka sezvo vatengi vaitaura kuti isu taifamba nekukurumidza kana kuita kuwanda kwakawanda. Nekufamba kwenguva, ndakatanga kutarisa kuti ndaigona sei kupa kukosha kusangano ravo kunze kwekuburitswa kwezvedu zvirevo zvebasa. Imwe nharaunda yaive zvipo… ingori zviyeuchidzo zvekufunga zvekutenda kurerutsa zuva ravo.
Zvimwe zvaive zvakasarudzika, zvimwe zvaive zvine chekuita nebhizinesi. Apo mumwe wevatengi vangu paakaenda kunzvimbo yakanaka nyowani, ndakavatengera yekutengesa imwechete-inosvitsa kofi yekubika. Pakatangwa mumwe wevatengi vangu podcast, ndakavatengera live-stream vhidhiyo kamera. Kune mumwe, ini ndakatenga matikiti kumutambo wekupa apo murairidzi weNFL yemuno aitaura. Apo mumwe mutengi aive nemwana wavo wekutanga, ini ndakatenga chinhu chakanaka pane yavo yekuda rondedzero.
Kupa chipo inzira yakanaka yekushandura ruzivo rwevashandisi, asi zvinofanirwa kuitwa nemazvo. Pandaishandira bepanhau renharaunda, ndakatarisa dhipatimendi rekushambadzira richikanda matikiti edare redzimhosva kune vashambadzi vakuru. Yakanga isiri iyo chipo, yakakura ikava tarisiro. Zvipo zvinoitwa zvega uye zvinogona kushandura hukama.
Ini zvakare ndakavhurika uye kutendeseka kune vatengi pavanonditenda kuti ivo, pakupedzisira, vakabhadhara chipo kuburikidza nemukana wavakandipa.
Loop & Tie inzvimbo yekudyidzana iyo inobatsira mabhizinesi kubatana nevatengi kuburikidza nehunyanzvi hwekupa zvipo. Iyo yakasarudzika-yakavakirwa zvipo chikuva inotumira mufaro uye pfungwa yekutenda iyo yakakosha kune inogara-kwenguva refu hukama hwevatengi. Ini ndakanyatso bvunzurudza ivo muvambi, Sara Rodell, pane yedu podcast.
Kubva 2011, Loop & Tie yanga ichichinja nzira iyo mabhizinesi anofunga nezve kupa zvipo. Kuvhiringidza iyo $ 125B yemabhizimusi ekupa zvipo indasitiri, sarudzo-yakavakirwa yekupa zvipo chikuva inoita kuti mabhizinesi kutsiva iwo echinyakare maitiro ekutumira zvakafanana zvinofinha, imwe-saizi-inokodzera-zvese chipo kune wese munhu.
Panzvimbo iyoyo, vanotumira vanogadzira yakatarwa zvipo kuunganidzwa nezvinhu kubva kune anopfuura mazana mashanu mabhizinesi madiki. Vagashiri vanobva vasarudza chavanofarira chinhu kana kusarudza kupa kukosha kwayo kune rubatsiro, zvichiita kuchinjaniswa kwezvipo ive nyowani yedata uye kutaurirana.
Shanyira Loop & Tie
Loop & Tie Salesforce App Pane AppExchange
Loop & Tie yatanga chirongwa chitsva che Salesforce. Iine Loop & Tie's mutengi kupa zvipo papuratifomu, vashandisi vanogona kutumira imwe kana zviuru gumi zvipo mukati memaminitsi mashoma. Ikozvino yave kuwanikwa kurodha pasi kubva kuAppExchange, vashandisi vanogona kumisikidza kuisa iyo app pane yavo Salesforce semuenzaniso uye kutanga kutumira zvipo kune vanotarisira uye vatengi ipapo ipapo.
PaLoop & Tie, tiri kuenderera mberi tichifunga nezvenzira dzatinogona kushandisa simba reetekinoroji kubatsira vanhu vazhinji kubatana. Kudhonza kwatinonzwa kuti tizive uye kupemberera isu kuburikidza nekupa zvipo yakanaka, isingagumi manzwiro. Nekupa vashandisi veSalesforce kugona kutumira zvipo zvakananga kubva kunyorera kwavo, tinogona kukurumidza kupa simba kune vanhu zvipo zvezviitiko kumakambani.
Sara Rodell, Muvambi uye CEO weLoop & Tie
Vashandisi veLoop & Tie vanofarira kusunga CRM yavo kune yekuita-yakavakirwa zvipo vanogona ikozvino kuvimba neSalesforce senzvimbo yavo yekumba yekutevera hukama hwevatengi uye kusvika. Nekuwedzera zvipo sechipo chekuita mukati meSalesforce nharaunda, Loop & Tie iri kubatsira vashandisi kusimudzira vatengi vavo nekushandurana kunooneka uye kusingakanganwiki.
Iyo Loop & Tie chipo chikuva chinogadzira zvine musoro mutengi ruzivo iyo mepu kune mabhizinesi 'zvido zvekukwanisa uye kuteedzera. Kuvaka mukati meSalesforce kunobatsira makambani kununura kubata kunonzwisisika iro riri dombo rekona yehukama hwakasimba, zvese zviri mukati megadziriro inoteedzana iyo inobatsira vatengi kuyera iyo ROI yezvipo zvavo zvirongwa.
Loop & Tie inopa yakasarudzika mutengi ruzivo rwunovaka hukama hunogara kwenguva refu uye zvikwata zvedata zvinofanirwa kunzwisisa mushandirapamwe, zvese zviri munharaunda-inoziva chikuva iyo, kuburikidza nekupa zvipo, inotsigira nharaunda yeakasiyana, vashoma mabhizinesi vatengesi.
Ona Loop & Tie paAppExchange
Tags: chirevob2b zvipomutengi kusvikaCRMvatengi kusvikachirongwa chechipokupa zvipochipo chekupachiuno & tailoop uye tieoutreachsalesforceSara rodell